Manaova OS H: kinova vaovao misy fanatsarana bateria | Androidsis
Google dia manolotra amin'ny fomba ofisialy ny kinova vaovao an'ny Wear OS. Ny kinova vaovao an'ny rafitry ny fiambenana, izay hita eo ambanin'ny anarana hoe H. Io no efa fanavaozana lehibe fahatelo hitantsika amin'ny fiambenana miaraka amin'ity rafitra miasa ity, satria volana vitsivitsy lasa izay dia tonga ny kinova 2.1. araka ny efa nolazainay taminao.
Ity kinova vaovao an'ny Wear OS ity dia misy lafiny lehibe amin'ny maha-zava-baovao azy, ary ny fanatsarana ny baterin'ny fiambenana. Raha manana ianao dia ho fantatrao amin'ny ankamaroan'ny tranga, matetika ny bateria dia maharitra iray andro, ka tsy maintsy andoavanao isan'andro ny famantaranandro, hahafahanao mampiasa azy amin'ny andro manaraka. Toa te hampiditra fanovana amin'io lafiny io i Google.
Koa satria ny ankamaroan'ny vaovao milaza fa mandao antsika ity kinova H an'ny Wear OS ity dia mifandraika amin'ny batterin'ny famantaranandro. Dingana iray lehibe manatsara ny fiainany mahasoa sy ny fizakan-tenany. Ka azo antoka fa hanome naoty tsara an'ity fanavaozana ity ireo mpampiasa rehefa mivoaka.
Lazainay bebe kokoa aminao ny vaovao fa mamela anay ity fanavaozana vaovao ny rafitra fandidiana ho an'ny smartwatches ity.
1 Manaova vaovao OS H
2 Inona no famantaranandro hanana ity fanavaozana Wear OS ity?
Manaova vaovao OS H
Ny fanovana rehetra hahatratra ny mpampiasa amin'ity fanavaozana ity dia natao hampahafantarana ny fanatsarana ny bateria amin'ny fiambenan'izy ireo. Io no tena ahiahin'i Google amin'ity tranga ity. Ka tsy isalasalana fa hisy fanatsarana miavaka, izay tokony hahatratra ny famantaranandro rehetra izay mampiasa ny Wear OS ho toy ny rafitra miasa.
Fanatsarana ny fahombiazana: Raha tsy nihetsika nandritra ny 30 minitra mahery ny smartwatch dia hametraka azy amin'ny fomba torimaso lalina ny rafitra miasa mba hahafahany mamonjy herin'ny bateria.
Mode fitehirizana bateria: Ny fanavaozana ny Wear OS vaovao dia mamela antsika hiova amin'ity maody ity. Hatsaraina io fomba fitehirizana bateria io, mba hanitarana ny fizakantenan'ny famantaranandro. Rehefa ambanin'ny 10% ny bateria dia ny fotoana sy ny fotoana ihany no haseho eo amin'ny efijery. Ny sisa amin'ny fampahalalana izay mivoaka matetika, toy ny dingana, ny kaloria may na ny angona hafa napetraky ny mpampiasa dia ho foana. Ka ilay bateria kely sisa tavela dia maharitra ela kokoa.
Dingana roa miala: Ankehitriny dia hanana ny fahafaha mamono ny famantaranandro amin'ny dingana roa tena tsotra isika. Mba hanaovana izany, ny hany zavatra tsy maintsy hataontsika dia ny mitazona ny bokotra herinaratra. Ny fanaovana izany mandritra ny segondra maromaro dia hampiakatra ny fanidiana sy hamerenana ireo safidy. Ka tsy maintsy misafidy fotsiny ny safidy mahaliana antsika amin'ity tranga ity isika.
Avereno ny fampiharana: Raha mifamadika fampiharana iray mankany amin'ny iray hafa isika, raha miverina amin'ny iray hafa isika dia afaka manohy ny toerana nijanonantsika. Noho izany, ny fampiharana dia hamonjy ny fanjakana nialantsika, ary hamerina azy io rehefa miditra indray isika. Ity dia hanampy handany loharano vitsy kokoa, satria ny tsy maintsy hanombohana ny fampiharana indray dia midika fanjifana bebe kokoa.
Inona no famantaranandro hanana ity fanavaozana Wear OS ity?
Ny hevitra dia ity kinova vaovaon'ny Wear OS ity Raiso ny mpampiasa rehetra amin'ny rafitra fiasan'ny famantaranandro. Na dia teo aza ny tranga teo aloha dia nisy faningana roa, izay azo averina amin'ity tranga ity. Fa ny ankamaroan'ny famantaranandro dia tokony ho afaka hiditra ao, toy ny maodely farany nahavoa fivarotana.
Raha amin'ny smartwatch anao, hay fa manana OS OS ho rafitra fiasao ianao, avy eo hanana ny fahazoana miditra amin'ity fanavaozana ity ianao. Izy io dia zavatra azonao zahana amin'ny sehatr'asa, mankany amin'ny faritra misy ny rafitra ary avy eo amin'ny kinova. Any no hahafahanao manamarina an'io, fa raha hita fa manana Android Wear ianao, dia tsy hahazo ny fanavaozana anao. Antenaina fa hahatratra ireo mpampiasa izy ao anatin'ny herinandro vitsivitsy, na dia tsy misy daty manokana aza.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Android Version » Wear OS H: Ilay kinova vaovao amin'ny rafitra fiasa
Huawei dia hamoaka ny finday avo lenta finday 5G voalohany eto amin'ny MWC 2019